दर्शकले रुचाए ‘शेरबहादुर’, कस्तो छ त व्यापार ? « Ramailo छ
दर्शकले रुचाए ‘शेरबहादुर’, कस्तो छ त व्यापार ?
प्रकाशित मिति : Feb 4, 2018
समय : 8:51 am
अभिनेता सुनिल थापा शिर्ष भूमिकामा प्रस्तुत भएको फिल्म ‘शेरबहादुर’ लाई दर्शकले रुचाएका छन् । शनिबार सुनिल र फिल्मका अर्का कलाकार रविन्द्र झा दर्शक प्रतिक्रिया बुझ्न हल हल गएका पुगेका थिए ।
शनिबार गोपिकृष्ण, अष्टनारायण लगायतका हलमा सुनिल थापा र रविन्द्र झा दर्शकबाट घेरिए । फिल्म राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिंदै दर्शकले शेरेबहादुर र बिहारीसँग सेल्फी खिचे । आर राजवंशी निर्देशित फिल्ममा सुनिल र रविन्द्र सहित कर्म, मेनुका प्रधानको मुख्य भूमिका रहेको छ ।
‘जात्रा’ निर्देशक प्रदीप भट्टराईले क्रियटिभ निर्देशकको रुपमा काम गरेका छन् । गौरी शंकर धुजु र धिरज राजबंशीको संयुक्त निर्माण छ । शुक्रबार ठिकै व्यापार गरेको फिल्म शनिबार भने केही राम्रो व्यापार गरेको वितरकको भनाई छ । प्रिमियरको भिडियो हेर्नुस् :